Imithetho emisha ngamabhilidi ‘anganakiwe’ – LIVE Express
UMASIPALA weTheku usushaye imithetho emisha ezobhekana ngqo namabhilidi angekho esimweni esigculisayo. Ngalo mthetho uMasipala usuzokwazi ukuthola ukuthi imaphi la mabhilidi ayinkinga uphinde wenze izinhlelo zokuthi avuselelwe.
Ngokwalo mthetho omusha sekuzoba khona izinhlawulo ezehlukene kulabo abawavumayo amacala ababekwe wona.
Isibonelo, labo abahlala noma abavumela ukuhlala emabhilidini asethathwa njenganayinkinga ekubeni sebevele sebenikiziwe izexwayiso, kuphakanyiswe ukuthi bazohlawuliswa izi-R5000. Kulabo abazovimbela izisebenzi zikaMasipala ukuba zenze umsebenzi wazo bona bazohlawuliswa i-R1500 ngokwesiphakamiso njengoba lokho kuzobe kusho ukungathobeli umthetho.
Isigwebo esikhulu esingatholwa ilabo abayotholakala benamacala ngaphansi kwale mithetho kungaba inhlawulo engeke idlule kwizi-R500 000, ukuboshwa okungeke kube ngaphezulu kweminyaka emithathu okukanye bathole zombili izigwebo okuyinhlawulo kanye nokuboshwa.
Kodwa-ke lezi yizijeziso ezisaphakanyisiwe nokusho ukuthi kusafanele zigunyazwe yiMantshi. Kuzothi zingagunyazwa bese zimenyezelwa emphakathini.
Leli Dolobha lithi leli yigxathu eliya phambili ekuqinisekiseni ukuthi iDolobha iTheku liba ngu ngqa phambili ekunakekeleni nangokwesimo senhlalo ngaphambi kokuthi kushaye unyaka wezi-2030.